I-iPhone sesona sixhobo sinempembelelo ngalo lonke ixesha | IPhone iindaba
Kutshanje sithethe ngo-Tim Cook, u-CEO we-Apple, obizwa ngokuba ngoyena mntu unempembelelo kubantu IXESHA imagazini, ingenzeka njani enye into, kwakhona i-CEO ye-Apple, enye yezona zinto zinoburharha, ezilawula olo luhlu, azifikeleli inqanaba lokucaca kukaSteve Jobs, kodwa akukho nto ingako ukusola uTim Cook, indoda eyafumana ithemba elincinci kakhulu kuye wonke umntu xa yayilixesha lakhe lokutshintsha ubuchwephesha bobuchwephesha. Ngoku IMagazini yeXESHA inikezela icandelo elifanayo kwizixhobo kwaye uye wabiza i-iPhone njengeyona gadget inempembelelo eyakha yenziwa.
Kuvakala ngathi kukuloba malunga nephephancwadi IXESHA kunye neApple, kodwa kubonisa kuphela inyani esiyibonayo kwaye siyive yonke imihla. Mhlawumbi umxholo ophambili ukhale kakhulu, ke masichaze, IXESHA lipapashe uluhlu lwezona zixhobo zinempembelelo ezingama-50 ngalo lonke ixesha, oomabonakude, iidroni, abadlali bomculo ... kwaye akukho mntu uya kothuka xa ebona i-iPhone ephezulu kuluhlu njengophawu lwazo zonke. La magama azinikezelwa kwifowuni yamakhwenkwe eCupertino:
U-Apple wayeyinkampani yokuqala ukubeka amandla okwenyani ekhompyutheni ezipokothweni zezigidi zabasebenzisi, kulapho yaqala khona i-iPhone ngo-2007. Iifowuni zazikhona kangangeminyaka, kodwa akukho nanye eyayifikeleleka kwaye intle njenge-iPhone. Izixhobo zeTouchscreen zeApple zingenise ixesha elitsha, zithathe indawo yamaqhosha ngeendlela ezilula. U-Lokanye yintoni eyenze i-iPhone ibaluleke kangaka ibisoloko iyisoftware yayo kunye neVenkile yeApp elandelayo. I-iPhone ibisisixhobo esinezicelo ezithandwayo, sitshintsha indlela esinxibelelana ngayo, esidlala ngayo, esithenga ngayo nomsebenzi.
I-iPhone kuluhlu olwanelisayo kakhulu lweemveliso. Kodwa ngaphezulu koko, ibutshintshe ngokusisiseko ubudlelwane bethu nekhompyuter kunye nolwazi, utshintsho oluya kuba neziphumo kumashumi eminyaka.
Ndimele nditsho ukuba iserver ikwisivumelwano esigqibeleleyo negama ngalinye abalinikele kwi-iPhone, kubandakanya neekoma zabo. Kodwa ayisiyiyo kuphela imveliso ye-Apple efakwe kuluhlu, i-iPad ayinakuphoswa kwindawo ye-25, i-iPod kwindawo ye-9 ngendlela ishishini lomculo elitshintshe ngayo kunye ne-iBook, ilaptop yokuqala elungileyo kwindawo ye-38.
INQAKU NGOKUQHUBEKA KWI-GADGET ZAMA-50 ETSHINTSHE IHLABATHI
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-iPhone sesona sixhobo sinempembelelo ngalo lonke ixesha
UJuan ortega sitsho
Kuyinyani oko, kubuhlungu ukuba baphumle kolo lonwabo kwaye bazenze ngathi bayaqhubeka nokuthengisa inkqubo evaliweyo ngexabiso eliphezulu ngelixa ukhuphiswano lufunda imihla ngemihla ukwenza ngcono.
Phendula u-Juan ortega
Luluphi ukhuphiswano olwenza ngcono? Ohh yima? Uthetha ukuba lagdroid? Jojojojojojojo
Ewe, ewe, kunye neqela lama-cores angama-200 kunye ne-256GB yegusha, mhlawumbi isebenza kwisiqingatha seheheheheheh
Kwaye ngaphambi kokuba uthethe nantoni na, ndiyabandezeleka ngenxa yokuba bandinike ilishwa nge-lagdroid, eyona nto imbi kakhulu yenziwe ngabantu ...
I-Apple yokutyhila i-Apple Music enomdla ngakumbi kwiWWDC